ဥရောပနှင့်ကမ္ဘာ့အမြန်ဆုံးရထားဘယ် Are | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > ဥရောပနှင့်ကမ္ဘာ့အမြန်ဆုံးရထားဘယ် Are
သငျသညျအစဉျအမွဲတစ်ခုခုအားဖြင့်ဥရောပသွားရောက်ကြည့်ရှုချင်ခဲ့ဖူး စဗျစ်ရည်, ရထားနဲ့တူ? ဘယ်လိုမှတက်သွားလာအသံပါဘူး 300 တစ်နာရီကိုကီလိုမီတာ? ဥရောပသင့်ရဲ့ဦးတည်ရာမှအလျင်အမြန်သင်ယူလိမ့်မည်ဟုမြန်နှုန်းမြင့်ရထား၏ကြီးမားသောကွန်ယက်ကိုရှိပါတယ်. high-speed ကိုမီးရထားဝန်ဆောင်မှုများကိုအဓိကမြို့ကြီးများတွင်သာရပ်တန့်. အဆိုပါရထား 1st ၏အဆင်ပြေလှည်းနှင့် 2nd လူတန်းစားပူဇော်, အဖြစ်ကောင်းသော ကူညီနေတဲ့န်ဆောင်မှုများ. ဤတွင်အကြောင်းပိုမိုဖွင့် အမြန်ဆုံး ဥရောပ၌ရထား.
အဆိုပါ Alfa Pendular ခရီးသွားမှတ်တမ်း ပေါ်တူဂီ၏ကမ်းခြေတလျှောက်, Braga ကနေဖာနှင့်ပေါ်တိုအတွက်မှတ်တိုင်များမှ, Coimbra, နှင့်လစ္စဘွန်း. ထက်လျော့နည်းအတွက်6နာရီ, သငျသညျတိုင်းပြည်၏အခြားဘက်ခြမ်းသို့ရောက်ရှိနှင့်ဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အဆောက်အဦကိုခံစားနိုင်ပါတယ်.
အဆိုပါ Alvia, ဥရောပပြိုင်ဘက်အတွက်စပိန်အမြန်ဆုံးရထားများမှာ, အထိ၏အမြန်နှုန်းမှာခရီးဝေး 250 တစ်နာရီကိုကီလိုမီတာ. စပိန်၏အဓိကမြို့ကြီးများချိတ်ဆက်အပြင်, ဒီရထားလည်းခေတ်သစ်သာယာအဆင်ပြေမှုများကမ်းလှမ်း. သူများသည်ခြေထောက်အတွက်လုံလောက်သောအာကာသထက်ပိုမိုနှင့်အတူကြီးမားသောကြောင့်အနှစ်သက်ဆုံးထိုင်ခုံများမှာ, စားပွဲခေါက်, နဲ့ audio နဲ့ video ရလဒ်.
ဥရောပတိုက်တွင် ICE ရထားလုံးကိုဂျာမနီရှိအဓိကမြို့ကြီးများနှင့်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများရှိများစွာကိုမြို့ကြီးများ connect. အလုပ်ချိန်နာရီန်ဆောင်မှုနှင့်အတူဤခေတ်သစ်မြန်နှုန်းမြင့်ရထားတွေအများကြီးကမ်းလှမ်း: အခြားအမှုအရာတို့ကိုအကြား, လေအေးပေးစက်နှင့်အတူလှည်း, ခြေထောက်ဆန့်ဖို့ကြီးမားတဲ့အာကာသ, ဗီဒီယိုအား screens နဲ့ audio စနစ်များ. ICE ကိုဘယ်နေရာမှာမဆိုဂျာမနီမှာခေါ်သွားပါလိမ့်မယ် နှင့်အခြားနိုင်ငံများသို့သွားရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်, ကဲ့သို့ သြစတြီးယား, ပြင်သစ်, နှင့် ဆွစ်ဇာလန်.
မြှားရထား (ယခင်က Eurostar Italia အဖြစ်လူသိများ) ခေတ်မီမြန်နှုန်းမြင့်၏ကွန်ယက်ဖွင့်ပါစေနဲ့သူတို့ဥရောပမှာအမြန်ဆုံးရထားအတွက်အီတလီပြိုင်ဘက်များမှာ. အတူခရီးသွား မြှား ထိုကဲ့သို့သောရောမမြို့အဖြစ်အများအပြားအီတလီမြို့ကြီးများ၏နှလုံးတစ်ဦးအမြန် connection ကိုခံစားရန်, ဗင်းနစ်, Florence, မီလန်, Verona, နဲ့နေပယ်. အီတလီမှာလူကြိုက်အများဆုံးမြို့ကြီးများမှဒါပေမယ့်လည်းအီတလီကျေးလက်၏သေးငယ်မြို့များမှသာသင်အလျင်မြန်ဆုံးဖြစ်နိုင်သော connection ကိုအာမခံကြောင်းက Le Frecce ရထား၏သုံးမျိုးရှိပါတယ်.
အဆိုပါ Eurostar မြန်နှုန်းမြင့်ရထားများအတွက်အကောင်းဆုံး option ဖြစ်တယ် ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့ကနေခရီးသွားလာ ဘရပ်ဆဲလ်သို့မဟုတ်ပဲရစ်. ဤသည်ရထားအားဖြင့်သင်တို့ကိုယူပါလိမ့်မယ် channel ကိုဥမင်လိုဏ်ခေါင်း လန်ဒန်၏စိတ်နှလုံးမှ. ခေတ်မီမြန်နှုန်းမြင့်ရထားရှိသမျှသောသက်သာခြင်းအကြောင်းခံစားနေချိန်တွင်ရေအောက်ခရီးသွားခြင်း.
သြစတြီးယားအကြားကို run ဤရွေ့ကားမြန်နှုန်းမြင့်ရထား, ချက်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ, ဂျာမနီ, ဟန်ဂေရီ, နှင့်ဆွစ်ဇာလန်. Railjet ရထားကြီးအသက်သာခြင်းနှင့်မြန်နှုန်းမြင့်ဝန်ဆောင်မှုကိုပူဇော်သက္ကာဘို့အားဖြင့်ခရီးသွားအတွေ့အကြုံကိုတစ်လှည့်ကွက်ပေးသော State-Of-The-Art မော်ဒယ်များဖြစ်ကြသည်. အထင်ကြီး onboard အဆောက်အဦများနှင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့န်ဆောင်မှုအင်္ဂါရပ်တချို့ရှိနေပါတယ်. မှတက်၏အမြန်နှုန်း 230 တစ်နာရီကိုကီလိုမီတာအထိရောက်ရှိခဲ့သည်နေကြတယ်. အဆိုပါ Railjet သင်သည်ထိုကဲ့သို့သောဂျာမဏီအဖြစ်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများသို့လည်းသြစတြီးယားနှင့်တစ်လျှောက်လုံးခရီးသွားလာခွင့်ပြု, ဆွစ်ဇာလန်, နှင့်ဟန်ဂေရီ.
TGV – ဥရောပမှာတော့အမြန်ဆုံးရထားဘို့ငါတို့ရွေး Is
အားလုံးပြင်သစ်နှင့်ကျော်လွန်ကျော် operating, TGV သမားရိုးကျရထားများအတွက်ကမ္ဘာကြီးမြန်နှုန်းစံချိန်ရရှိထားသူ. အပေါ်3ဧပြီလ 2007, TGV POS ရထားရောက်ရှိခဲ့သည် 357.2 တစ်နာရီမိုင် (574.8 km / h), ဒါကြောင့်ဥရောပအတွင်းပဉ္စမအမြန်ဆုံးရထားအောင်. TGV trainset ပင်ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း, 515.3 km / h (320 တစ်နာရီမိုင်) အထူးစမ်းသပ်အခြေအနေများအောက်တွင်နှင့်အားဖြင့်နှောင့်အယှက်ဘယ်တော့မှဖြစ်ပါတယ် ရာသီဥတုအခြေအနေ ထိုကဲ့သို့သောသိပ်သည်းမြူသို့မဟုတ်အခြားအဖြစ်.
Grande Vitesse ရထားတစ်ပေါ်တွင်သင်ယူပါလိမ့်မယ် ရင်ခုန်စရာရထားခရီးစဉ် ပဲရစ်သို့မဟုတ်ဘယ်နေရာမှာမဆိုမြေထဲပင်လယ်ကမ်းခြေတလျှောက်တွင်သင်သည်လျှင်ဒါ, ကျေးဇူးပြု. တစ်ဦး TGV လက်မှတ်ဝယ် ရုပ်ရှင်ကိုဖမ်း ကမ္ဘာကျော်ကိန်းနှင့်ပျော်မွေ့ လှပသောစပျစ်ဥယျာဉ် အဆိုပါ Loire ချိုင့်များ၏, ထိုနောက်မှ. ထိုကဲ့သို့သော Marseille အဖြစ်မြို့ကြီးများသွားရောက်လည်ပတ်ခြင်းအားဖြင့်သင့်စီးနင်းဖို့အနည်းငယ်ပိုစွန့်စားမှု Add, လိုင်ယွန်, နှင့်ဘော်ဒိုး.
Marseille ရထားမှ Montpellier
Marseille ရထားမှ nice
ပဲရစ် Marseille ရထားမှ
အဆိုပါ SJ ဆွီဒင်မြန်နှုန်းမြင့်အထိတစ်မြန်နှုန်းမှာအထူးသကင်ဒီနေးမြေပြင်အနေအထားနှင့်ပြေးဘို့ဒီဇိုင်းထုတ်နေကြပါတယ်ဥရောပအတွက်အမြန်ဆုံးရထားတစျဦးဖွစျသညျ 200 တစ်နာရီကိုကီလိုမီတာ. ဤရွေ့ကားရထားနှစျသိမျ့မြင့်မားသောအဆင့်ပူဇော်နှင့်သင်ကဲ့သို့သောများစွာသောဆွီဒင်မြို့ကြီးများ၏ဗဟိုမှလျင်မြန်စွာသွားလာနိုင်ရန်ခွင့်ပြု စတော့ဟုမ်း, ဂို, နှင့်မာလ်မို. ဤရွေ့ကားမြန်နှုန်းမြင့်ရထားလည်းကိုပင်ဟေဂင်ကိုတိုက်ရိုက်သွားလာ (ဒိန်းမတ်) ဥရောပတိုက်တွင်အရှည်ကြာဆုံးလမ်းနှင့်ရထားလမ်းတံတားမှတဆင့်, အဆိုပါအံ့မခန်း Oresund တံတား.
နယူးနှင့်စပျစ်သီးကိုတဦးတည်းမှာ - ဥရောပအတွက်အမြန်ဆုံးရထားကြောင့်ဖြစ်နိုင်ခြေပူဇော်. အပေါ်ကစာရင်းထဲမှရထားကိုရွေးချယ်ပါနှင့်ငါတို့သည်သင်တို့ကိုသင်ရရှိရန်အတွေ့အကြုံပျော်မွေ့ပါလိမ့်မယ်သေချာ.
သငျသညျဥရောပအပေါ်အတွက်အမြန်ဆုံးရထားတို့တွင်ရထားလက်မှတ်တွေစာအုပ်ဆိုင်နိုင်ပါတယ် Save-A-ရထား နီးပါးတိုင်းဦးတည်ရာကိုအတွက်အထက်ဝင်ရောက်ခဲ့သည်3မိနစ်များ, မှာ စျေးအသက်သာဆုံးရထားလက်မှတ်တွေနှုန်းထားများ နှင့် obnoxious ဘွတ်ကင်အခကြေးငွေများစိတ်သက်သာရာရ!
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ထို့နောက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fwhich-are-the-fastest-trains-in-europe-and-the-world%2F%3Flang%3Dmy- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
#fasttrains #highspeedtrain ရထားအကြံပေးချက်များ ရထားခရီးသွား